अनिकालको बीउ - युवराज नयाँघर - साहित्य नेपालसाहित्य नेपाल अनिकालको बीउ - युवराज नयाँघर - साहित्य नेपाल
अनिकालको बीउ – युवराज नयाँघर
पानी नपरेर धर्ती फुटिरहेथ्यो पटपटी । बल्ल मौसम बदलियो र पोखियो दसैँभर ि। आकाश नबर्सिउन्जेल जताततै त्राहिमाम् । सबै भर माथिकै । मास् ितरबाट थोपै नचुहिएपछि परेन त बित्यास ।
यी दुवैलाई जे जसरी हेरे पनि हुन्छ । जुन परेलीका विम्बले हेरे पनि हुन्छ । जहाँको मनले बेलिविस् तार लाए पनि हुन्छ है । समयले धरधरी रुवाएको यो निष्ठुरी क्ष्ाणमा गाँठो भएको तर्क फुकाएर पोखिरहेको छु ।
कति असंगत स् िथति छन् यी दुई पदावलीमा । प्राप्य र अप्राप्यको दोहोरो लुकामारीलाई एउटै हत्केलामा नराखी नहुने ।
दक्ष्ािणका बीउ । उत्तरका बीउ ।
सग्लोभन्दा कुहाएर खान गौरव लाग्छ हामीलाई । जति धेरै घ्याम्पामा सडायो, उति पुरुषार्थ गरेको ठान्छौँ हामी । पछाडि सर्दै गएकामा कुनै दिन हाम्राे हृदयले आपत्ति गर्दै गरेन ।
यसलाई नयाँ विन्दुबाट हेर्दा देखिन्छ, मुख बाएका जनताको अतृप्त आकांक्षा अर्थात् जनता । राज्यको आश्वासन र योजना बीउ । परस् पर यी दुवैमा दुई गोलार्द्धको अवस् था छ, स् िथति छ अनि प्रलेख छ ।
पानी नपर्नु अस् वाभाविक होइन । स् वाभाविक त्यहाँनिर लाग्दैन, छङ्छङाउँदा खोला बगेका बगेकै छन् । नदीमास् ितरका खेतमा पटपटी फुटेका गरामा धानको बीउ सुकेर गएको छ । प्याकप्याकी भएका गराका कलिला बिरुवा पक्कापक्की मर्दैछन् ।
बाँडचँुडभन्दा पनि सेरोफेरो सबै मेरो भन्ने सभ्यता घरभित्र पसेको पसेकै छ । ‘लुटी ल्यायो, भुटी खायो’ संस् कृतिलाई टाउकोमा टेकाएर हाम्रा अगुवाहरूले नजित्ने काम गरे, धेरैअघिदेखि । अब त यो अधिकार पो बन्न पुग्यो ।
वास् तवमा खुवाउने बानी गरेको हामीले नै हो । हुम्ला, जुम्ला, जाजरकोट वा मुगुका रुवाबासीमा अनिकाल ओर्लिएको ऊ बेलैदेखि हो । रोल्पा, रुकुम, मुस् ताङ, मनाङका हिंक्कामा सहकाल बेपत्तिएको धेरैअघिदेखि नै हो । खालि चिन्ता पोखियो, चेतना पोख्न सकेनौँ हामीले ।
अनिकालको पक्ष्ाबाट उठेको स् वर यो ।
हरेक दस वर्षमा हाम्राे समाजले केही प्रश्न गर्ने गरेको छ । कुर्सीका वरपर बस् नेले प्रश्नकर्तालाई राम्राे उत्तर पनि दिँदैन, प्रश्नै पनि राम्ररी भट्याइएको हुन्न । विचारको अनिकाल, दृष्टिकोणको अनिकाल, विवेचनाको अनिकाल र विद्रोहको अनिकालले परपिाकबिनै निकास पाउँदै आएका छन् ।
अनिकाल कुनै अन्नको सापेक्ष्ा शब्द हो भन्ने ठान्दिनँ म ।
बीउ कति संकटग्रस् त नाम ! कति अस् ितत्वपूर्ण परचिय ! कति संरक्षणयुक्त आवश्यकता !
बाटो, बस् ती, भन्ज्याङ, आँगन सबैतिर अनिकालबारे चर्चा छ । पिँढी, दलान, बुइँगल, पेटी, कोठा जतासुकै बीउबारे चर्चा छ । अनिकाल त समयको अस् िथर भेल हो, यो दीर्घकालसम्म रहँदैन । बीउ त भविष्यको मौसम हो, सुगन्ध हो, फल हो र स् वाद हो । यसको मर्मलाई बिर्सनु कसरी ?
यही हो महत्त्व बुझाइ ।
भावनामा बहकिने जाति परेछौँ हामी । जसले जताबाट र जहिल्यै नि हावाको एक झोँका चलाई मात्र दिए पनि हाम्रा निम्ति पुग्यो, केही समयभरलिाई विषय पुग्छ । हामी उम्लिरहन्छाँै, पोखिएको जानकारी अरूले दिनुपर्छ ।
103 Readers have read this post.